माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको नाम फेरियो, यस्तो छ नयाँ नाम ? - hamrosandesh.com – hamrosandesh.com
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको नाम फेरियो, यस्तो छ नयाँ नाम ?
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डका नाम फेरिएको छ। जनयुद्ध सुरु गर्दा राखेको नाम फरिएर प्रचण्डबाट पुष्पकमल दाहाल भएको नेताहरुले बताएका छन्। नेकपा एमालेका नेता पूर्वमन्त्री प्रभु साहले नेपाल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड अब पुष्पकमल दाहालमा परिणत भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
गृह जिल्ला रौतहटमा बडा दसैँ दिपावली तथा छठपर्वको अवसरमा आयोजित शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रममा उनले माओवादीको सिद्धान्त छोडेर प्रतिक्रियावादीको पछिपछि लागेकाले अब प्रचण्ड पुष्पकमल दाहालमा परिणत भएको बताए।
साहले माओवादी र कम्युनिस्टको नाउँमा भोट लिएर शेरबहादुर देउवाको पछि लागेका प्रचण्ड र माधव नेपाल कुनै पनि हालतमा कम्युनिस्ट हुनै नसक्ने दाबी गरे ।‘माओवाद भनेको इमानदार, विकासप्रति लगनशील, सहिदको सपना साकार गर्ने हुन्छ।
तर आफ्नो स्वार्थको निमित्त सबै सरकारमा सहभागी हुने नीति बोकेका प्रचण्ड कुन एंगलबाट माओवादी हुन् ?’ उनको प्रश्न छ, ‘कम्युनिस्टको भोट लिएर प्रतिक्रियावादीको खुट्टामा सता चढाउने माओवादी होइन साच्चै अर्थमा गद्दार हुन् ।
‘प्रचण्ड लाई ६२ सालसम्म्मा कसैले नचिन्ने अवस्था थियो। कतिपयले पारस नै प्रचण्डको भन्थे। तर नेपाली जनताले आफ्नो ज्यानको आहुति दिएर प्रचण्डलाई राष्ट्रिय नेता बनाए । आव उनै प्रचण्डले जनतालाई धोका दिएका छन् तर जनता लाई धोका दिने सँधै बेघर हुन्छ,’ साह भन्छन्।
संसारमै कतै नदेखिएको ७६१ सरकार नेपालमा चलाउन नसकिने उनको भनाइ छ । मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको कारण कसैलाई बहुमत न आउने र सरकार आउने जाने अवस्था बनेको साहले बताए। संविधान बनाउनेले नेपाली जनतासँग माफी मागेर संविधान नबद्लेसम्म देश नचल्ने उनको दाबी छ।
कार्यक्रममा सांसद कुन्दन कुश्वाहा, मौलापुर नगर प्रमुख रीना साह, उपप्रमुख गौरी शंकर जयसवाल, कटहरिया नगर प्रमुख सियाराम कुश्वाहा, नेताहरू त्रिभुवन साह, मनोज यादव जयप्रकाश कौशल, ठागा दास लगायतले धारणा राखेका थिए।
यसैगरि, नेपालको राजनीतिक इतिहासमा गजबको घटनाहरुले निरन्तरता पाइरहेका छन्। यी रोचक घटनाहरुबीच अर्को रोचक घटना हुने संकेतहरु देखिएको छ। नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरु नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र तीनवटै दल खारेज हुनसक्ने देखिएको छ।
उनीहरु संविधानसभामार्फत् आफैले जारी गरेको संविधान पालना नगर्दा खारेजीको अवस्थामा पुग्न लागेका हुन् ।संविधानको धारा २६९ को उपधारा ४ बमोजिम दल दर्ताका लागि निवेदन दिंदा राजनीतिक दलले पूरा गर्नुपर्ने शर्तमा ५ वर्ष या विशेष परिस्थितिमा साँढे ५ वर्षभित्र पदाधिकारीको निर्वाचन हुने व्यवस्था हुनुपर्छ भनिएको छ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा १३ मा कुनै दलले ऐन वा अन्य संघीय कानून बमोजिम निर्वाचन आयोगलाई बुझाउनुपर्ने अन्य विवरण वा प्रतिवेदन नबुझाएमा वा संविधान वा संघीय कानून बमोजिम दल दर्ता हुन पूरा गर्नुपर्ने शर्त पूरा नगरेमा त्यस्तो दलको दर्ता कायम नरहने उल्लेख छ ।
२०७२ सालमा जारी भएको संविधानमा कुनैपनि दलको पदाधिकारीको निर्वाचन साँढे ५ वर्षभित्र गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था राख्ने काँग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताहरु नै प्रमुख हुन्। उनीहरुले यो संविधानलाई विश्वको उत्कृष्ट संविधान भनेका थिए। तर, संविधानको धारा २६९ मा लेखिएको राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्था उनीहरु आफैले पालना गरेनन्।
नेकपा एमालेले महाधिवेशन नगरेको ७ वर्ष भइसकेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले महाधिवेशन नगरेको त्योभन्दा बढी समय भइसकेको छ। एमालेको नवौं महाधिवेशन २०७१ सालमा भएको थियो। एमाले र माओवादी केन्द्र एक भई २०७५ सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी गठन भएपछि साँढे ५ वर्षको व्यवस्थातर्फ बेवास्ता भयो।
तर, नेकपा नाम जुधेर सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्रलाई ब्युँताइदियो। २३ फागुन २०७७ को यो फैसलाले दुवै पार्टीको स्थिति पूर्वअवस्थामा पुग्यो। संविधानको धारा २६९ लाई आधार मान्ने हो भने एमालेको कार्यसमिति अवैधानिक भइसकेको छ। माओवादी पनि अवैधानिक भइसकेको छ।
निर्वाचन आयोगमा दुवै दल दर्ता हुन सक्ने अवस्था छैन । एमाले आन्तरिक विवादमा रुमल्लिएको छ। माओवादी नयाँ कार्यसमिति चयनतर्फ गम्भीर छैन। संविधानमा स्पष्ट रुपमा साँढे ५ वर्षभित्र नयाँ कार्यसमिति चयन गर्नुपर्ने भनिएकाले उक्त अवधिभित्र पदाधिकारीको निर्वाचन नगर्ने एमाले र माओवादी केन्द्र खारेज हुनसक्छन्।
काँग्रेसको अवस्था पनि त्यही छ। नेपाली राजनीतिमा लामो इतिहास बोकेका पार्टीहरु खारेज हुने बाटोमा पुगेका छन्। तर तीनै पार्टीले महाधिवेशनको मिति तय गरिसकेकाले पार्टीको नाम जोगिने झिनो आशा बाँकी नै छ। इमान्दार मेडिया बाट